အလုပ်နှင့်စရိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အလုပ်နှင့်စရိုက်
Posted by TTNU on Jan 19, 2012 in Editor's Choice, Jobs & Careers | 53 comments
လူတို့၏ စရိုက်အမျိုးမျိုး စိတ်နေပုံစံ အသီးသီးတို့ကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများအနက်
အောက်ဖော်ပြပါ စကားလုံးအချို့ ကို သင့် မိတ်ဆွေများထံတွင်၎င်း ၊ သင့်ထံတွင်၎င်း
(၁) ဖန်တီးတတ်သော (creative)
(၂) ဝေဖန်နှိုင်းဆတတ်သော (critical)
(၃) စိတ်ပုတ်သော (bad-tempered)
(၄) ဖရိုဖရဲနှိုင်သော (disorganized)
(၅) တိတိကျကျ ကြိုတင်စီမံထားတတ်သော (well-organized)
(၆) ကျွမ်းကျင်သော၊ ကျင်လည်သော (efficient)
(၇) မေ့တတ်သော (forgetful)
(ဂ) သတိရှိသော (careful)
(၉) သတိမမူသော (careless)
(၁၀) နမောနမဲ့နှိုင်သော (reckless)
(၁၁) ရက်ရောသော (generous)
(၁၂) အလုပ်ကြိုးစားသော (hardworking)
(၁၃) စိတ်ရှည်သော၊ သည်းခံသော (patient)
(၁၄) စိတ်မရှည်သော၊ စိတ်လောသော (impatient)
(၁၅) အေးဆေးတည်ငြိမ်သော (level-headed)
(၁၆) စိတ်ပြောင်းလွယ်သော (moody)
(၁၇) အချိန်မှန်သော (punctual)
(၁၈) အားထားရသော၊ စိတ်ချရသော (reliable)
(၁၉) စည်းကြပ်သော (strict)
(၂၀) အလေးအနက်ထားသော (serious)
(၂၁) ဖော်ရွေသော (friendly)
(၂၂) ခပ်စိမ်းစိမ်းနေတတ်သော (unfriendly)
(၂၃) လက်တွေ့ဆန်သော (practical)
(၂၄) စူးစမ်းသော (curious)
(၂၅) စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော (imaginative)
(၂၆) ထူးဆန်းသော (strange)
(၂၇) လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းသော (sociable)
(၂၈) ဖော်ဖော်ရွေရွေ ရွှင်ရွှင်ပျပျနေတတ်သော၊ ပွင့်လင်းသော (outgoing)
(၂၉) ရှက်တတ်သော (shy)
(၃၀) မာန်ပါသော၊ ကြမ်းကြုတ်သော၊ တက်ကြွသော (aggressive)
စသဖြင့်စသဖြင့်သော ဗီဇ စရိုက်များ အမျိုးစုံလှပေသည်။ ထိုကြောင့် မည်သည့် အလုပ်
အကိုင် မျိုးရွေးချယ်လုပ်ကိုင်မည် ဆိုသည်ကို အဆိုပါဗီဇ စရိုက်များအခြေခံ၍ စဉ်းစား
ကျမ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်၏ သမီးလေး အကြောင်းပြောပြပါမည်။သူမသည်
ဝါသနာမပါ ကြောင်း သိရပါသည်။ သူမလက်ရှိအောင်မြင်နေသောအလုပ်မှာ ကျူရှင်
လုပ်ငန်းဖြစ်နေပါသည်။ ယခုခေတ်အခါတွင် စက်မကိုင် အိမ်မဆောက်သော အင်ဂျင်
မိမိတို့ရရှိထားသော ဘွဲ့နှင့် မိမိတို့ အသက်မွေးလုပ်ငန်းနှင့် မသက်မဆိုင် လုပ်ကိုင်ရင်းနှင့်
အောင်မြင်နေသူများစွာကို ကျမတို့ တွေ့ဖူးကြပါသည်။ ကျမအမြင်တွင်မူ သူတို့၏
စရိုက်အမျိုးမျိုး စိတ်နေပုံစံ အသီးသီးတို့ကို အဆင်ပြေစွာ အသုံးချသွားနှိုင်၍သာ အောင်မြင်
အဆိုပါ စရိုက်အမျိုးမျိုး စိတ်နေပုံစံ အသီးသီးတို့ကို မိမိတို့ အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွင် အံဝင်
ဂွင်ကျ ဖြစ်မဖြစ် ဆန်းစစ်နှိုင်ရန် စိတ်ပညာရှင် (John Holland) ကမူ လူတို့တွင်ရှိတတ်သော
ဗီဇ အုပ်စုများကို အကြမ်းအားဖြင့် (၆) ပိုင်း ခွဲ ပြထားကြောင်း သိရပါသည်။
အလုပ်ခွင်မပျော်ပိုက်သူများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အချို့ မှာ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်
၍ မပျော်ခြင်း။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အဆင်မပြေ၍မပျော်ခြင်း။ ပေးဆပ်ရသောလုပ်
အားနှင့် လစာငွေ အချိုးမကျ၍ မပျော်ခြင်း ။ စသဖြင့် အလုပ်ခွင်မပျော်ခြင်း များစွာ
ရှိလာကြပါသည်။ ကျမ အမြင်မှာမူ မိမိအလုပ်နှင့် မိမိ ဗီဇစရိုက် မကိုက်၍ မပျော်သည်က
ဥပမာ ဆေးရုံမကြိုက်တတ်သူသည် သူနာပြု အလုပ်လုပ်၍ အဆင်မပြေနှိုင်။ ဖန်တီးရေးသား
နှိုင်စွမ်းမရှိသူမှာလည်း စာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနှိုင်ပါ။
ကိန်းဂဏန်းများတွင်မပျော်မွေ့သူမှာ စာရင်းကိုင်ရန်လက်တွန့်ပေလိမ့်မည်။ အမြင့်ပျံသန်းလျှင်
အန်တတ်သူအဖို့ လေယာဉ်မယ်လုပ်ရင်း ခေါင်းကိုက်နေတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် မည်သည့်အလုပ်အကိုင်မျိုးလုပ်ရန် မည်သို့သောစရိုက်ရှိသင့်ကြောင်း၊
မည်သည့် ဗီဇအုပ်စုနှင့်ဆိုင်သည့် သူဖြစ်ကြောင်းတို့ကို မိမိဖာသာ
ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရပါမည်။ အလုပ်အကိုင်တိုင်းတွင် ဗီဇစရိုက် တစ်မျိုးမကလိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွေ့ရှိနှိုင်ပါသည်။
ဥပမာ၊ အောင်မြင်သော ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် Personality Types ဗီဇ အုပ်စု
(၆) မျိုး အနက်မှ အနည်းဆုံး(၁) လက်တွေ့ပုံစံ ၊(၂) စူးစမ်းပုံစံ (၄) လူဝင်ဆန့်ပုံစံ
(၅) စည်းရုံးပုံစံ (၆) စာအုပ်ကြီးပုံစံ စသော (၅)မျိုးခန့် ပါဝင်နေကြောင်းတွေရပေမည်။
ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် ဝေဖန်နှိုင်းဆတတ်သော (critical) ၊ တိတိကျကျ ကြိုတင်စီမံထားတတ်သော (well-organized) ၊ ကျွမ်းကျင်သော၊ ကျင်လည်သော (efficient) ၊သတိရှိသော (careful) ၊ အလုပ်ကြိုးစားသော (hardworking) ၊
စိတ်ရှည်သော၊ သည်းခံသော (patient) ၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော (level-headed)
အချိန်မှန်သော (punctual) ၊ အားထားရသော၊ စိတ်ချရသော (reliable) ၊
စည်းကြပ်သော (strict) ၊ အလေးအနက်ထားသော (serious) ၊ ဖော်ရွေသော (friendly) ၊
လက်တွေ့ဆန်သော (practical) ၊ စူးစမ်းသော (curious) ၊လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းသော (sociable) ၊ စသော စသော Personality Traits အမျိုးမျိုးတို့ ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသည်မှာ
ထိုနည်းတူစွာ အခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများတွင်လည်း ထိုသို့ သက်ဆိုင်ရာဗီဇ စရိုက် အမျိုးမျိုးတို့ကို လိုအပ်သလိုပုံဖော် သွားကြမှသာ လုပ်ခွင်ပျော်သော ၊ အလုပ်နှင့် စရိုက်
အံကိုက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်အောင်မြင်သော၊ အကျိုးပြုသော ပညာရှင်များ
ဒီနေ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အားပြီဆိုပြီး ရေးချင်တာလေးတွေ အားခဲ
တင်လိုက်တာ ည(၁၂)ရှိတော့မယ်။ မနက် လမ်းမလျှောက်တော့ဘူး
ဆိုပြီး ဒီပို့စ်လေးကိုတင်ပါတယ်။ (၁၀)ခါလောက် ကနက်ရှင်ပြုတ်ကျပါတယ်။
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာတွေလည်း ခပ်သော့သော့လေးဖတ်လိုက်ပါတယ်။
ကော်မန့်မရေးနှိုင်လိုက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မအားလိုက်လို့ ရွှေကြက်ယက်အဖွဲ့
(ကိုစိန်သော့၊ ပေ၊ပေါက်၊ဖရဲ)တို့နဲ့ မန်မန်လိုက်မစားဖြစ်တာလည်း စိတ်မကောင်းပါ။
ကိုဘလက်ရဲ့  မန်းဂဇက်တူးဆွခြင်းကိုတောင်မှ ကမန်းကတန်းကပိုကရိုဝင်ဖတ်သွားရကြောင်းပါ။
welcome တီချယ် !!!!!!!!!!
တီချယ်ရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ စာလေးပါ အနော် ကူးထားလိုက်တယ် အိမ်က
အနော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကြာမကြာဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ် နေပျော်ရဲ့လားလို့ အများအားဖြင့်တော့ နေလို့ပျော်ပါတယ် တခါတခါ ညစ်စရာရှိတော့လည်း ညစ်တာပေါ့ တီချယ်ရယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘယ်အုပ်စုဝင်နေသလဲ မသိဘူး
ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် ဟိုယောင်ယောက်ဒီယောင်ယောင် ဖြစ်နေလို့ ဟီး
ံHello My Dear Pooch,
You are the very first reader for this post. Thank you for seizing the initiative.
Whowho told me you came to Shwekyeemyint on Saturday. Good work!
On February 12th, there will be Myaut_Oo Sayadaw’s preaching again. Join us.
yes, teacher. i will….
တီချာနု – မီးမီး က ဒုတိယ။ ;-)
အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာ၊ မှတ်သား စရာကောင်း တဲ့ အချက်တွေ ပါဘဲ။
တီချာနု ရဲ့ Post နဲ့ မိုးဇက် ရဲ့ ခလေးတွေ ရဲ့ စိတ်အကြောင်း Post ကို ဆက်စပ်ပြီး မိဘ တွေ ကလဲ ကိုယ့်သားသမီး ရဲ့ စရိုက်လက္ခ္ခဏာ ကို ကြည့်ပြီး သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီနိုင်တဲ့ ပညာရေး လမ်းကြောင်း ဘက်ကို ပံ့ပိုးပေးသင့်တယ် လို့ တွေးမိသွားလို့ပါ။
“စိတ်ပုတ်သော၊ ဖရိုဖရဲနှိုင်သော၊ မေ့တတ်သော၊ သတိမမူသော၊ နမောနမဲ့နှိုင်သော၊ စိတ်မရှည်သော၊ စိတ်လောသော၊ စိတ်ပြောင်းလွယ်သော၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းနေတတ်သော၊
မာန်ပါသော၊ ကြမ်းကြုတ်သော၊ တက်ကြွသော” စိတ်ထား စရိုက် ရှိသူများ သည် ဘယ်လို အလုပ်မျိုး နှင့် သင့်တော် ပါသလဲ ဟု စဉ်းစားကြည့်နေပါတယ်။ ;-)
အဟဲ နောက်တာပါ တီချာကြီးရေ –
တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ အဆိုးအကောင်း တွေ ဒွန်တွဲ နေတာ ပါ မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ ကျွန်မမှာလည်း အဲဒီ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ က ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်ပါဘဲ။
အကောင်းစရိုက် ကို ပိုကောင်းအောင် မြှင့်တင်ပြီး အဆိုးစရိုက် ကို နဲနိုင်သမျှ နဲ အောင် လုပ်မှ ဘဝ မှာ တင့်တယ်သူ၊ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်သူ ဖြစ်မှာ လို့ ထင်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် တီချာနု ရဲ့ reminder လို Post လေးတွေ က လူ့စိတ်တွေကို အကောင်းဖက် ကို ပြန်ပြန်ဆွဲပေးပါတယ်။
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် တီချာနုရှင့်။
ဈေးသည်လိုလို မန်နေဂျာလိုလို အနေအထားမျိုးဖြင့် လူပေါင်းများစွာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဆူညံလှုပ်ယှား
အော်ဟစ်ဆူပူ ချော့မော့တောင်းပန် ၍နေသောဘ၀သည် ၀မ်းရေးအတွက်ဖြစ်တတ်ပါသည်။
မိမိလိုလားနှစ်ခြိုက်သော သီချင်းရေး ကဗျာရေး စာတွေရေး ပန်းချီဆွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်အစရှိသော
ကျွန်တော်လည်းတူတူပါပဲ အကိုပေါက်ရေ အပြင်မှာနေတဲ့စရိုက်ကတစ်မျိုး
ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါနော် …. ။
ကျွန်မကတော့ စရိုက်နဲ့သင့်တော်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်မိထားလို့ အဆင်ပြေနေပါတယ် …
ဒါပေမယ့် စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့ အတူအလုပ်လုပ်ရတာတော့ အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနေသေးတယ် …
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါပဲ တီချာကြီးရေ..
နွယ်ပင်ကိုယ့်ကို ပြန်ကြည့်မိတော့ အဆင်ပြေသလို
မပြေသလိုလိုပါပဲ တစ်ခါတစ်ခါတော့ အဆင်မပြေမူတွေက
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်အုပ်စုထဲ ဝင်နေမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး
“ စိတ်ရှည် သည်းခံ တတ်ခြင်း သည် လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် အောင်မြင်ခြင်း အထောက်အပံ့ ဖြစ်သည် ။ ”
အင်း တီချယ်ကြီးပြောမှ ကိုယ့်စရိုက်နဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား။ ဘာတွေလိုအပ်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပါ စဉ်းစားတွေးမိလာပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အလုပ်မှာနေပျော်နေသေးတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးပေါ့လေ ကြီးလာတော့ လုပ်တာနဲ့ ပညာသင်တာ လမ်းကြောင်းကွဲလာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ ၀ါသနာပါနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ကျေးဇူးပါတီချယ် သမီး သေချာ စဉ်းစားဖို့ ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့။
တခါတလေ အလုပ်လုပ်ရင်း စိတ်ကုန်လာတတ်..
တခါတရံတော့လည်း ကြွက်သိပ်ကြီးလွန်းရင် ကြောင်မခုတ်ဘဲ လက်ရှောင်ပေးရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်၊ ဝါသနာမပါလို့ ဟုတ်ရပါဘူး တီချယ်ကြီး…။
ကြောင်ဆိုတဲ့မောင်တွေရဲ့ စရိုက်က တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်နားလည်ရခက်
(၁) ကျားဆရာကြောင်ဆိုတဲ့ စရိုက်
(၂) ငါးကြော်မကြိုက် ကြောင်မိုက် အဖြစ်မခံတဲ့ စရိုက်
(၃) ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုယ် မြေယက်ဖုံးတတ်တဲ့ စရိုက်
(၄) သခင်တွေ နာမကျန်းရင် ဒဏ်မခံနှိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စရိုက်
(၅) ကြွက်မခုတ်ဘဲ ကြွက်ထောင်ခြောက်မှာမိနေတဲ့ ကြွက်ကလေးကိုမှ
စုံနေတာပါ့။ ကြွက်သိပ်ကြီးလွန်းရင် ကြောင်မခုတ်ဘဲ လက်ရှောင်ပေးတဲ့ စရိုက်
ကိုတော့ ကြောင်လောကရဲ့  (A very new manoeuvre) လို့ ခေါ်ရမယ်နော်။
မှန်ပါတယ်၊ စိတ်ကောင်းရဲ့  အဖော်ကစိတ်ညံ့လေ။ အညံ့တွေကအားပြိုင်လေလေ
အကောင်းရဲ့ သတ္တိကကြွလေလေတဲ့။ ဖီလိုဆိုဖာဒေါ်သနုပြောတာ။
Captain America ရေ… ကိုပေါက်လိုပဲနော်။
ကိုယ်တိုင် Personality Type ဝင်ပေမဲ့ အလုပ်အတူလုပ်သူတွေမှာ အံမဝင်သူတွေ
ပါဝင်လာနှိုင်တာ ဒုတိယအဆင့် Barrier တစ်ခုပါပဲ။ (Anything that prevents people
from being together or understanding each other.) ဒါပေမဲ့ ဝေရေ..ဒုတိယအဆင့်
လောက်မို့ ဖြေရှင်းရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။
အဆင်မပြေတာလေးတွေများလာရင်တော့ Type လွဲနေတာဖြစ်မယ်၊အလုပ် ပြန်ပြောင်း
ရခက်ရင်တော့ ကိုယ့်Personality Traits ကို ပြောင်းပြီး လေ့ကျင့်ရတော့မှာပေါ့။ ကိုယ်တိုင်က
adaptable ဖြစ်ရင်တော့ ကာလကြာလာတဲ့အခါ အဆင်ပြေသွားမှာပါကွယ်။
စိတ်ရှည်သည်းခံ ပါရမီရင့်သန်ခြင်းကို အားပေးနေပါတယ်။
ငယ်တုန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကြီးလာတော့ လုပ်တာနဲ့ ပညာသင်တာ
လမ်းကြောင်းကွဲလာပေမဲ့ ပျော်နေတယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာစရာပါကွယ်။
စိတ်ကောင်းလေးတွေ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာ တီချာတို့ အလုပ်ခွင် ဖိစီးမှု
များတဲ့သူတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ ဝေဒနာပါ။
တီချယ်ကြီး ပြုစုထားတာ ရှယ်ပဲဗျာ..
ပြည့်စုံလှပါပေ့…ဝေါဟာရတွေလဲ များကြီး..မို့ ..သများကြိုက်ကြိုက်..
ကျနော်ကတော့ အလုပ်နဲ့ ဇရိုက်တခြား ဆီ
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်မသူတော်..အဲလေ မွှားလို့ …
ညှင်း..ညှင်း ဆိုပဲ ညှင်းကလဲ ပေါက်သေးသကိုး …ဟီးးး
ရှူရှူးမက တများကို ညှင်းပေါက်နေတယ်လာပြောနေဒယ်..
ပွေးလေး နဲနဲပဲ ကျန်တော့တဲ့ဟာဂျီးကို
မောင်ရင်လေးက ဘယ် Type ထဲကလဲ။
စာဖတ်တာဆိုတော့ စူးစမ်းပုံစံ (The Investigative Type) မှာပါမယ်။
ှ့Shaking the bottle ဆိုတော့ လက်တွေ့ပုံစံ (The Realistic Type) နဲ့
အနုပညာပုံစံ (The Artistic Type) များလား။
ကြီးမိုက် ဆိုတာ အသက်ကြီးပေမဲ့ တွေ့တဲ့ လေဒီပျိုတွေက ” Wow! Wicked!”
လို့ (Wolf-whistles) လုပ်ကြတာကိုပြောတာလားဟင်။
တီတီနု ရေးတဲ့ ပို့စ်လိုမျိုးလေးတွေ အများကြီးဖတ်ရ ..
ကွန်မန့်လေးတွေလိုက်ဖတ်ရ နဲ့ တော်တော် လေးကို အသိဥဏ်ရော..ဗဟုသုတရောရတဲ့အတွက်
ညီမ ကတော့ ကိုယ့်စရိုက်က ဘာလဲဆိုတာတောင် ပြန်မစဉ်းစားမိတော့ပါဘူး..
ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားအောင် ပျော်ရွှင်မိအောင် စိတ်နှစ်ထားလိုက်တာပါပဲ..
လုပ်ရင်းနဲ့ ၀ါသနာပါလာပီး..အဲဝါသနာဟာ စရိုက်ဖြစ်လာတယ်ထင်မိပါတယ်..
လေးစားစွာ …အားပေးဖတ်မှတ်သွားပါတယ် တီချယ်ကြီးရယ်..
တလောလေးက အဲ့လာ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ရဖူးပါတယ်…။
(ပုံစံကွဲတစ်မျိုးပါ. ..သူက ၄မျိုးခွဲပြီး ၄မျိုး ပြန်ဆင့်ပွားတာခည ..)
ပြန်ဆိုလို့သာ ပြန်ပေးရတာ …လူတော့ မူးနောက်တွားတာပါပဲခည.. ..
ဆိုက်ကိုတက်စ် ကွက်ရှင် ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ဟာ အတော်ဆိုးပါသည်ခညာ…
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချည်း မေးခွန်းပြန်ပြန်ထုတ်မိပီး… ဟိုဟာပဲဖြစ်နေသလိုလို ဒီဟာပဲ ဖြစ်နေသလိုလိုနဲ့ ….
ဟိုဟာပဲဖြစ်နေသလိုလို ဒီဟာပဲ ဖြစ်နေသလိုလိုနဲ့ ….
သေချာပြီ မောင်မင်း …
အသင်သည် တော်တော်စုံသော စွယ်စုံကြီးပါတကား။
>>အသင်သည် တော်တော်စုံသော စွယ်စုံကြီးပါတကား။
အဲ့လို မီဟုတ်ရပါဘူး တီချယ်ကြီးရယ်…
အောက် မှာ spoon-feeding ဆိုတဲ့စာလုံးလေး ပါလာလို့ ထပ်မန့်ဖြစ်တယ်နော်….
မောင်ဂီ ဘာသာပြန်ရတဲ့ မေးခွန်းလွှာကြီးမှာ …ဆေးပညာ ဆိုက်ကို အသုံးအနှုံး..
HR က၀ိတွေရဲ့ အသုံးအနှုံး …ဒါတွေပါရဲ့ဗျာ ….ကိုယ် မတတ်သော်ငြားလည်း …
googling လုပ်လိုက်တိုင်း ထွက်ထွက်ကျလာတော့ ဘာသာပြန်ရတာ သိပ် မခက်ခဲဘူးခင်ဗျ …
ခက်တဲ့အပိုင်းတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုရင် ….ရာဇ၀င်ထဲက ထင်ရှားဖြစ်စဉ်များ…လူသားများ
ရှိတ်စပီးရီးယား ပြဇာတ်များနဲ့ …စကားပုံများ ပါပဲ …..
ဥပမာ သင်သည် ဟမ်မလတ်(အရီးတော်လတ် မဟုတ်ပါ) လိုလူစား လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးခင်ဗျ….
သူရို့ဆီက လူတိုင်း အန်ဒါစတွတ် သိနေတဲ့ ဇာတ်ကောင် စရိုက်တခုကို ချပြပြီး သည်လိုလူစားလား
မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကိုး ခင်ဗျား ….
ဒါမျိုးကျ တိုက်ရိုက်ပြန်ရင် တော့ အပြင်စာမဖတ်တဲ့ စာဖြေသူ (ဟန်မလတ် မကြားဖူးသူ)
နားမလည် မှာ အသေအချာပဲ ..
(ကျနော်တို့မှ သူတို့လို ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းကြောင်း စတာတွေရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေကို
တိတိပပ ကျကျနန မသင်ခဲ့ရတာကိုးနော…)
သည်တော့ ကျနော်တို့ အကျွမ်းတ၀င် မဖြစ်ခဲ့တာတွေ ခွကျတာတွေပေါ့ခင်ဗျား….။
ကျနော်လည်း မြန်မာရာဇ၀င်မှာ အနှီ ကာရိုက်တာမျိုး လိုက်ရှာကြည့်သေးတယ် ….
ဥပမာ သင်သည် —- လို လူစားမျိုးလား ရေးပေးနိုင်အောင် …
တွေ့ဝူးရယ်ဗျာ …( ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ သမိုင်းပြဌာန်းစာအုပ်မှာ လူကောင်း – လူဆိုး ၂မျိုးပဲပါသကိုးဗျာ..
လူ့သဘော လူ့သဘာဝက ၂မျိုး မကတာ တီချယ်ကြီးပိုစ့်က အဖြေမို့ …)
ရာဇ၀င် တိုင်းမလဲပဲ …ဘုရင်တိုင်းသည် သူရဲကောင်း …သူတော်ကောင်း ဘုရားဒါယိကာ ….
(လူပဲ ..ဆိုးကွက်လေးတွေရှိမှာပါပဲ …ကျနော်တို့က ဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ..ဇောင်းပေး ဖတ်ခဲ့ရတော့
စရိုက်လက္ခဏာပိုင်း မေ့ကျန်ရစ်တယ် ထင်ပါ့….)
သူတို့ဆီက ကလေးတွေ (၁၀နှစ်က ၁၅နှစ်) အတွင်း ဆို သမိုင်း ကို မိုင်နာပဲယူထားဦး …သမိုင်းဝင်တွေရဲ့..
လူ့သဘော လူ့မနော ကို သင်ယူခွင့် လေ့လာခွင့်ရကြတယ်ခင်ဗျ …….သည်တော့ …လူ့ သဘာဝ ကို
ကျနော်တို့ သမိုင်းဖတ်စာကတော့ .. ..မွန်-ဗမာ သတ်ချင်သတ် …ဘုရင်တပါး ဘုန်းလက်ရုံးပြချင်
ယပက်လက်ကို တိုက် …အင်္ဂလိ ကျုးကျော်စစ်ကို ပြောင်မြောင်စွာ ခုခံရင်း ..သိက္ခာရှိရှိ လက်နက်မမျှလို့ ရှုံး ..
ဒါတွေ .သည်ဖြစ်စဉ်တွေပဲ ဆိုတော့ ….
တကယ်ပါ … သမိုင်း ဟေ့ ဆို ..ခုနှစ်ဖြစ်စဉ် အလွတ်ကျက်ပြီး ၁နှစ်၁တန်းအောင် လာခဲ့ကြတော့ …
ဘိုင်ဟတ် ကျက်နေသ၍ ကတော့ ပြဌာန်းစာအုပ် အပြင်ဘက် မထွက်နိုင်သ၍ကတော့ စပွန်းဖိဒင်း ထဲက
ထွက်လိမ့်ဦးမယ် မဟုတ်ဘူး ..တီချာနုရေ ….
အပြင်စာ များများဖတ်ဦးမှ ….
ကြီးမိုက်က ကျုပ် ရေစစ္စရီလပ်ထားတာ..တရားစွဲခံရမယ်..ညှင်း..ညှင်း..
ဂျူးဂျူးမရေ…(ကိုယ့်စရိုက်က ဘာလဲဆိုတာတောင် ပြန်မစဉ်းစားမိတော့ပါဘူး..
ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားအောင် ပျော်ရွှင်မိအောင်
စိတ်နှစ်ထားလိုက်တာပါပဲ..) သိပ်တော်တာပါပဲ။ အရမ်းတော်တာပါပဲကွယ်။
ကြီးမိုက်ရေ…ကိုပေါက်ဖော် ကပိုကြီးမယ်ထင်တယ် သားရေ။ သူက တီချာ့ ဇာတ်လမ်း
ထဲက Professor လေ။:P
၀ါသနာပါလို့သာ လုပ်ရတာ အလုပ်ထဲမှာ အတိုက်ခိုက်တွေများလို့ စိတ်ဓါတ်တွေတော်တော်ကျနေတာ။ ဖတ်ပြီးတော့ အားတက်မိပါကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တီတီရေ။
တီချယ်ကြီးရေ … အလုပ်နဲ့ စရိုက်တွေအကြောင်း အသေးစိတ်ထောက်ပြသွားတာ … အကွက်စေ့ကျနလှပါတယ် … ။ အလုပ်ခွင်ဆိုတာမျိုးကလေ …. များသောအားဖြင့် … လူမှန်နေရာမှန်မရောက်တတ်တာမျိုး …… ။ နည်းနည်း နားရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူး … ဒီလိုပါ … ။ လူတွေ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ … ကိုယ်ဝါသနာပါတာမျိုး… ၊ ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ … အစပိုင်းတော့ဝင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့ … ။ နောက်ပိုင်း … အလုပ်ပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် … လုပ်ခနဲ့ လစာ မတန်ဘူးထင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြောင်းသွားတဲ့ လူတွေရှိသလို … အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် အလုပ်ဝင်လုပ်ရပြီး … သင်ရင်းတက်ရင်းနဲ့ .. နေရာမြဲသွားတဲ့ လူတွေလည်းတွေ့ရတယ် …
တီချယ်ကြီးရေ … တကယ်တော့ …အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့ လူအတော်များများ … သင်ကြားထားရတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့.. သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ခွင်ရဖို့ … ရှားကြပါတယ်… ။ ကျွန်မဆိုလည်း … ကွန်ပျူတာနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတယ် …. လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်က စက်ရုံတစ်ခုမှာ တောက်တိုမယ်ရ … ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဆို … ကျောင်းတွေပြန်ကုန်ပြီ … ။
တကယ်တော့… ရလာတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု တည်မြဲဖို့အတွက်သာ ကြိုးစားသင့်တာပါ … ။ ဘယ်အလုပ်ရမှ … အလုပ်လုပ်မယ် .. လစာဘယ်လောက်ရမှ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် … အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းရှားပါးပါတယ် … ။ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ .. အတိုက်အခံ အဖုထစ်ဆိုတာ ရှိစမြဲပါပဲ … အဓိကက မိမိရဲ့စိတ်ဓါတ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် … ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိလျှင် … ဘယ်နေရာက ၀င်ဝင် အသုံးဝင် အစွမ်းစရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါပဲ … ငါကတော့ … ဘ ယ်လောက်လစာရမှ … လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေ … သွားလျှောက်တိုင်း အင်တာဗျူးမအောင်လို့ … အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရသူတွေ မြင်နေရပါတယ် …။ ဒါက အလုပ်ကို တန်ဖိုးမထားလို့လို့ပဲ ..ဝေဖန်ချင်ပါတယ် … ။
နောက်တစ်ခုက … မြောက်သစ်ကိုင်းလွတ်ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ .. အလုပ်ခုန်တဲ့လူတွေပါ .. သာတဲ့ အလုပ်ကို ကူးတတ်ကြတယ် … ။ ဒါပေမယ့် .. အချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုထိကြာအောင် ရသင့်တဲ့နေရာ၊ရောက်သင့်တဲ့နေရာမရောက်တာမျိုးတွေ .. ၀မ်းနည်းစွာတွေ့ရပါတယ် … ။ အလုပ်ခုန်ခြင်းဖြင့် တခြားအလုပ်မှာ အသစ်ဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်လို့ပါ … ။
ကိုယ်တိုင်ကလည်းသင်ယူ ကြားနာလိုစိတ်ရှိမယ် …. သည်းခံတတ်မယ် ..အတင်းမပြောတတ်တဲ့ နှုတ်စောင့်စည်းသူမျိုးဆိုလျှင်တော့… ဘယ်အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နေပျော်မယ်လို့ ထင်ပါကြောင်း ၀င်ဆွေးနွေးသွားပါတယ် … ။
အိတုံ ကို ဆေးခန်းလေး အကြောင်းရေးရေးနေလို့ ဆရာဝန်မှတ်နေတာ။ ;-)
ဟုတ်ဘူး အရီးလတ်ရေ… ကျွန်မက ဆေးခန်းမှာလည်း တောက်တိုမယ်ရပါပဲ
သမီးကွန်မန့်ရှည်လေးကိုဖတ်လိုက်ရတာ ရင်ထဲကို ပီတိအဖတ်အဖတ်လာကပ်သလိုပါပဲ။
အိတုန်ဆွေးနွေးသလိုပဲ၊ အလုပ်ဝင်ရင်းနဲ့ အလုပ်ခင်သွားတဲ့သူတွေ ရှိတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့  အလုပ်ခွင်က နေပျော်လုပ်ပျော်တဲ့ Job Description ရှိတတ်ပါတယ်။
(ချင်းတောင်.. ဒေါက်တာလတ်ငြိမ်းကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့ကွယ်။)
သမီးပြောတဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့ လူအတော်များများ သင်ကြားထားရတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့
သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ခွင်ရဖို့ ရှားကြတယ် ဆိုတာ တီချာလက်ခံပါတယ်။
(တီချာတို့ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဆင်းတဲ့ ဆရာမ တွေကလည်း ဒီနေရာမှာ နောက်ထပ်
ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ အတိုက်အခံ အဖုထစ်ဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတာရယ်၊
မိမိရဲ့စိတ်ဓါတ်က အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာရယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိလျှင် ဘယ်နေရာက ၀င်ဝင် အသုံးဝင် အစွမ်းစရှိတယ်
ဆိုတာရယ်တွေ ကို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံပါတယ်။
အလုပ်ခုန်သူတွေရဲ့  ဘဝကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။
အိတုန်ပြောသလိုပဲ အလုပ်ခုန်ခြင်းဖြင့် သူတို့ဟာ တခြားအလုပ်မှာ အသစ်ဆိုတဲ့
အသုံးနှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ဆီကဘာအနှစ်မှမရတတ်ပါဘူး။
Post ကိုဖတ်ရင်း တီတီနုတဲ့ စာထဲမှာ…
အနစ်နာ၊(မနက်လမ်းလျှောက် ချင်တာကိုစွန့်လွှတ် ခြင်းအပါအဝင် ကြိုးစားရေးသားခြင်းစသည်)
ဆိုတဲ့ စရဏ တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံ စွာ သိမြင် ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျား။
တာပေါ် ရေ မကျော်ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို မြတ်နိုးစွာ ရွတ်ဆိုမိပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တပည့်သားသမီးများကို ထားခဲ့တဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့ ရေးသားလိုက်တဲ့စာလေးတွေနဲ့
ပြန်လည်ဖြေကြားနေတဲ့ ကော်မန့်လေးတွေရဲ့ စေတနာလှိုင်းတွေဟာ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှလိုက်လို့မမှီပါဘူး။
သည်ပို့စ်ကိုတွေ့လိုက်တော့ ကျနော် အတွက်လည်း ပြည့်စုံမှုတခုအပို ဆောင်းရသွားပါတယ်။
မပူးခ်ျရေးတဲ့ အငုံစိတ်၊ မမိုးဇက်ရဲ့ ကလေးပြုပြင်ရေး၊ကို ခုဒီပို့စ်က အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့
အကောင်းဆုံး ဆီမီနာ တခုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။တီချယ်တို့သုံးဦးပေါင်းရဲ့ ဆီမီနာ
လူသားသဘာဝအသိတရားကနေ၊ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့သွန်သင်မှုအရ နောက်ဆုံးပါစင်နယ်လတီကောင်းသွား
တယ်(သို့) idiosycronatic person(တမူထူးခြား) ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးကို ကျနော်
လူ့သဘာဝတရား အဆင့်မှာတော့ မျိုးရိုးဗီဇသဘောပေါ့နော်၊နောက်အဆင့်တွေက “သင်ယူရမှု”အဆင့်တွေ
မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကို လျှောက်ရင်တောင် လေ့လာသင်ယူရပါတယ်။
တီတီနုရဲ့ စာမှာကျနော်သွားမြင်လိုက်တာက အဲဒီ အကျင့်စရိုက်တွေ ရယ်။
သူတို့ကို ဖန်တီးတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ပေါ့ခင်ဗျာ။လှစ်ကနဲ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားကိုလူတိုင်းမတတ်နိုင်ပါဘူး။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ပါစင်နယ်လတီတွေ ကွာလာတာပေါ့နော်။
ဟေတုပစ္စယောရဲ့ ဟိတ်ခြောက်ပါး က အမြစ်သဖွယ် အသီးအပွင့်အရွက်တွေထွက်လာသလိုပါဘဲ။
အမောဟ = ဝိဇ္ဇာ
ဆိုတဲ့ အမြစ်သုံးခုနဲ့ သူ့ဆန့်ကျင်ဖက်အမြစ်တွေက “ရောယှက်”နေလေတော့
ကျနော်တို့မှာလဲ စိတ်ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး အဲဒီအပေါ် ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တုန့်ပြန်မှုတွေကလဲ
အမျိုးမျိုးဖြစ်တော့ ဘဝကလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာပေါ့နော်။
လူလောက စိတ်တွေထွေပြား ဘဝ မပြတ်သား လို့ဆိုရလေမလား။
ဆိုတာ သိဖို့ခက်တယ် ဆိုတာ တီတီနုရဲ့ ပေတံနဲ့ ပိုပြီးပေါ်လွင် သွားတာပါဘဲ။
တိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့ သူတယောက်ဟာ ရမ်းကားမှုမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။
သူ့လို မတိကျ သူတွေကို စိတ်တို မယ်၊ အလိုမကျဖြစ်မယ်။
တိကျတတ်လို့ ပါစင်နယ်လတီ ကောင်းပေမဲ့
အပေါက်ဆိုးလို့ ဆိုရှယ်ဒီးလင်း ညံ့ပြီး ပါစင်နယ်လတီ မကောင်းပြန်ဘူး။
ဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်မျိုးနဲ့ အကိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကျ ပိုလို့လေးနက်သွားပြန်ပြီပေါ့။
လုပ်သင့်လို့ လုပ်နေသူတွေကအများစု၊ မငြင်းနိုင်တဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေတွေက ကြိုးနဲ့တုပ်ထားထက်
တောင်ခိုင်လွန်းလို့ ရုန်းမထွက်နိုင်ကြသူတွေ ကလဲ အများကြီးမဟုတ်ပါလား။
ဗီဇစရိုက်တွေ “မှန်”ပေမဲ့ (သို့)မှန်ခဲ့ပေမဲ့
“ပုံအသွင်းခံ ပါစင်နယ်လတီ” တွေ
လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ အတွေးပွါး မိပါတယ်။
ဘဝရဲ့ လိုအပ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို တီတီနုရဲ့ “အကျင့်စရိုက်ဘီကာလေးတွေ” မှာ ထဲ့လိုက်ရင်
“ပါစင်နယ်လတီ ဓာတ်ပြုအရောင်တွေ” ထွက်လာမှာကို ကျနော် လေးလေးနက်နက်ကြီး လေ့လာ
Comment လှလှလေးအတွက် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။
ကိုသစ်ရေးတာတွေဖတ်လိုက်ရရင် အတွေးအခေါ် အတော်ကောင်းတဲ့လူပဲ လို့
ရေးထားတဲ့ စာသားတွေကို တစ်ချက်ချင်းပြန်ဆွေးနွေးလိုက်ရင်တောင် မှ
အရိုးကိုအရွက်ဖုံးသွားမှာစိုးလို့၊ အလှပျက်သွားမှာစိုးလို့၊ အသာလေးထားလိုက်ချင်တာ။
(ဗီဇစရိုက်တွေ “မှန်”ပေမဲ့ (သို့)မှန်ခဲ့ပေမဲ့ “ကြိုးဆွဲရာ-က-ပါစင်နယ်လတီ” တွေ
“ပုံအသွင်းခံ ပါစင်နယ်လတီ” တွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ အတွေးပွား မိပါတယ်။)
ဒါပေမဲ့ ကိုသစ်ရယ် ၊ ရှင်ပြောသလို မငြင်းနိုင်တဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေတွေက ကြိုးနဲ့တုပ်ထားထက်တောင်ခိုင်လွန်းလို့ ရုန်းမထွက်နိုင်ကြသူတွေ ကလဲ အများကြီးမဟုတ်ပါလား။ဒီတော့ ” မီးစင်ကြည့်က ပါစင်နယ်လတီ” တွေ မလွဲ
မသွေ ရှိနေခဲ့ကြရတာပေါ့ နော်။
ဆရာသစ် ရေ – အဲဒီ ဆီမီနာ အတွက် အခုထဲ က တစ်နေရာစာ Book လုပ်သွားပါတယ် ချင့်။
ဖောအိ (လေးစား) စွာဖြင့်
ဒီ ဆီမီနာ က လက်တွေ့ ” Initiating ” ကိုလုပ် စေချင်တာ မလို့။
မခင်လတ်ကလဲ အဓိကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေထဲက တယောက်ဖြစ်မှာပါ။
ဪ ကြုံလို့ပြောရရင်ကျနော် ဆွေးနွေးစေချင်သူမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
နာမည်တပ်ပြောနေရတာက ဆွေးနွေးတာနည်းသွားမှာစိုးလို့ (လောဘ၊လောဘ)။
ကျမတို့ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ လိုင်းရွေးကြတော့ ကိုယ်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ ဘယ်လိုင်းဝင်မလဲလို့ ချိန်ပြီး လျှောက်လွှာတင်ကြတယ်။ ကိုယ်ရွေးတဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းကို ဂဃနဏ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ ကိုယ်သင်ရတဲ့ ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဝေဖန်ကြည့်တယ်။ တခြား မေဂျာရရင်ကော အခုလို ဖြစ်ပါ့မလားပေ့ါ။ နောက်တော့ အဖြေထွက်လာတယ်။ ဒီမေဂျာမရလို့ နောက်မေဂျာရရင်လည်း ကြိုက်မှာပါပဲလို့….
မမပြောတာသဘာဝကျပါတယ်။ တီချာလည်း B.Ed မတက်ဘဲ
ဝ/သ တက်မယ်ဆိုလည်း ရတဲ့ မေဂျာမှာ ထူးချွန်အောင်ကြိုးစားရင်း
ဝါသနာပါလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (၁၀)တန်းအောင်ခါစက အဖေ့ကို
သမီးရှေ့ နေလုပ်ချင်တယ်လို့တောင်ပြောမိသေးတယ်လေ။ ကြည့်ရတာ
တီချာတို့တွေမှာ Vocational Interest ကို သိပ်ကြီး အလေးအနက်မထားမိ
ဆရာမကြိး TTNU ခင်ဗျာ ခွင့်မတောင့်မိပဲ ဤ ပို့စ်လေးကို တခြားဆိုဒ်လေးမှာ ဖော်ပြမိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် …နောက်နောင် ကြိုက်နှစ်သက်မိခဲ့ရင် ခွင့်တောင်းပြိးမှ ယူပါတော့မည်
နားလည်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင့် . . . ။
မာမီရေ ဒီပိုစ်လေးကတော့ဆိုက်တော်တော်များများမှာ ဖော်ဝပ်မေးလ်တွေကတစ်ဆင့်ပြန့်သွားပါပြီ။
ကိုချစ်ရအောင်ရေ အဲလိုလေးဆိုတော့ တကယ့်ကို မင်္ဂလာရှိသွားပါသဗျာ။
ကျွန်တော်က အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ရှိနေသောကြောင့် မည်သည့် အလုပ်နှင့် သင့်တော်မည်ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အခုထိ မသိ ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ … ဆရာမကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူပါသည် –
(၃) ဖရိုဖရဲနှိုင်သော (disorganized)
(၄) တိတိကျကျ ကြိုတင်စီမံထားတတ်သော (well-organized)
(၅) ကျွမ်းကျင်သော၊ ကျင်လည်သော (efficient)
(၆) မေ့တတ်သော (forgetful)
(၇) သတိရှိသော (careful)
(၈) ရက်ရောသော (generous)
(၉) အလုပ်ကြိုးစားသော (hardworking)
(၁၀) စိတ်ရှည်သော၊ သည်းခံသော (patient)
(၁၁) အေးဆေးတည်ငြိမ်သော (level-headed)
(၁၂) စိတ်ပြောင်းလွယ်သော (moody)
(၁၃) အချိန်မှန်သော (punctual)
(၁၄) အားထားရသော၊ စိတ်ချရသော (reliable)
(၁၅) အလေးအနက်ထားသော (serious)
(၁၆) ဖော်ရွေသော (friendly)
(၁၇) ခပ်စိမ်းစိမ်းနေတတ်သော (unfriendly)
(၁၈) လက်တွေ့ဆန်သော (practical)
(၁၉) စူးစမ်းသော (curious)
(၂၀) စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော (imaginative)
All-round developed person ဘွဲ့ယူစေဗျား။
မောင်ကင်း နောက်နှစ်မှာ မြန်မာပြည်သမ္မတ အဖြစ်ဝင်အရွေးခံစေချင်ပါသည်။
ဝါသနာပါတဲ့အလုပ် ဆိုတဲ့ အနှစ်ချုပ်ပါ။
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့စနစ်တခုရှိဖို့ ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။
ခက်တာက Unclegyi ရေ… ကျမတို့ ကလေးတွေ (အများစု) ကိုမေးကြည့်ရင်
ဘာဝါသနာပါရမှန်းမသိတဲ့ (မဆုံးဖြတ်နှိုင်တဲ့ Spoon-feeding ကြိုက်တဲ့) ကလေးက
ကျမလေ မိဘကိုလည်းအပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ သူတို့ခမျာ သားသမီးတိုင်းကို
အမြဲတမ်းနောက်ကျနေတတ်တာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။
ဒီပို့စ်လေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကိုချောပေးထားတဲ့ Strength တွေ တီချာ့ဆီမှာ အများကြီးရယ်ပါနော်။
တီချယ်ရေ… ကျနော်အရင်ကတော့ မှန်ကန်တဲ့ တရားသူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်လာတာက IT နဲ့အသက်မွေးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊ ၀ါသနာမပါဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်လုပ်ရင်းနဲ့မှ ၀ါသနာပါလာပြီး ဆက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အလုပ်နဲ့ ၀ါသနာပါတာ တခြားစီလို့ထင်ခဲ့ရပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ IT နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို လေ့လာရင်းနဲ့ ကျေနပ်နေနိုင်ခဲ့ပြီ …. တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ ၀ါသနာပါတာနဲ့ အသက်မွေးရတာ တခြားစီဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရရှိတဲ့ နေရာမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့၊ ကြိုးစားဖို့ပဲလိုမယ်ထင်ပါတယ်နော်၊ တီချယ်ပြောပြတဲ့ အချက် ၃၀ ထဲမှာ ကျနော့်အတွက် အဆိုးအကောင်းဒွန်းတွဲနေတဲ့ အချက်တွေကိုတွေ့ရလို့၊ သေချာဖတ်ပြီး ကူးသွားပါတယ်နော်၊ ပြုပြင်စရာတွေလည်း အများကြီးပါ၊ တီချယ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…….
တကယ်လုပ်ရင်းနဲ့မှ ၀ါသနာပါလာပြီး ဆက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဆိုတာလေး
ကောင်းတယ်။ ဝါသနာပါလာအောင် အားထုတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့
ငြင်းလို့မရလောက်ဘူးထင်တယ်။ ဒီ Effort လေးကပဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့  Interest
ဟုတ်ပါတယ် ရောင်ခြည်ခ ရယ်၊ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တိုင်း နဲ့ Career နဲ့
ထပ်တူထပ်မျှ ကျဖို့ မဖြစ်နှိုင်ပါဘူးကွယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်ကြီး ပုံစံထွက်နေပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်မှူးများလုပ်ဖြစ်ခဲ့မိရင် ၀ါသနာနဲ့ အလုပ်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မလားလို့တွေးမိပါတယ်။
ခုတော့ ကဗျာလိုလို အထာလိုလို